Kanjani ukuze ubhale isikhalazo ukuba ihhovisi lomshushisi? umbuzo ezinjalo zingase ngokushesha noma kamuva uhambisane nawo wonke umuntu, ngenxa ukwephula amalungelo sonke sibhekana. Ngokuhambisana nomthetho, umshushisi yiso umzimba ukuthi ibheka okuphula ahlukahlukene. Ngaphambi ukushaya kule Ngokwesibonelo, kufanele kube ukuthi ubone ukuthi uzodlala kanjani ukubhala isikhalo kumshushisi.
Okokuqala, isicelo kumele kahle ukhombise nola nje kokuthi isistimu ye-Office WaseRussia Lomshushisi has isigaba sabaphathi bayo siqu kanye lunye, ezifana lempi, ezisemadolobheni, njll Okwesibili, kudingeka unqume ukuthi kwifomu kulethwa isikhalazo (isikhalazo, uphenyo, isicelo). Okwesithathu, kubalulekile ukuba banake zezitsha ne isampula izicelo (endaweni yokwamukela izivakashi ehhovisi lomshushisi), ukutadisha okuyinto ungathola umqondo wokobana inomboro ukubhala isikhalo kumshushisi.
Njengomthetho, umbhalo kuhlukaniswe kathathu. Ekuqaleni uchaza amaqiniso noma izenzakalo ezibangele ukwelashwa, futhi yabe isihlaziywa isimo wamanje (okuyinto, ngokusho isicelo, kungukuphula, nokunye okunjalo), ngenxa abamenyiwe ukwenza izenzo ezithile. Ngokuvamile kukhona omunye umbuzo: "Indlela ukubhala isikhalo ehhovisi lomshushisi ngesandla noma kukhompyutha?". Azikho izidingo ezikhethekile: kokubili ongakhetha kuvumelekile. Kodwa kufanele wazi ukuthi umbhalo illegible kungabangela ekumisweni kwe kunjalo futhi ukuyishiya ngaphandle kokucabangela. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba usinike igama lakho eligcwele kanye nekheli lokuhlala: ayoshaywa indiva sikhalo engaziwa.
Kanjani ukubhala isikhalo ehhovisi lomshushisi, ngolimi olulula noma usebenzisa imigomo esemthethweni? Lena ongenazimiso. Into esemqoka ukuthi amaqiniso yayicacile, futhi akukho ehlotshisiwe, kuyadida, isitsotsi nolimi oluhlambalazayo. Isikhalazo kufanele kube ngangokunokwenzeka kahle wonke amaqiniso, sihlobene ngokuqondile namaphuzu kunjalo, abekwe njengamaqiniso elibanzi ngangokunokwenzeka. Lokhu kuzokwenza lula futhi zihambisane umsebenzi umshushisi, ngakho uthole impendulo. Musa overload isicelo ezingadingekile, ezingahlobene udaba kolwazi: lokhu kungase kubangele ukuba sisibheke okushiwo isikhalazo futhi kubangele izinqumo eziyiphutha.
Indlela ukubhala isitatimende ukuze abashushisi, nge amadokhumenti asekelayo, noma ngaphandle kwabo? Kuphuma umfakisicelo. Njengoba umkhuba ubonisa, kungcono ukwenza ebufakazini obutholakalayo futhi wenze izimpawu ezifanele kuwo umbhalo yezikhalazo isignesha. amakhophi Better oqondile (mhlawumbe eqinisekisiwe) kunokuba okwangempela ukuthi kungase kudingeke kamuva ekuqhubeni phambi kwenkantolo.
Kwezinye izimo, ukubhala izikhalazo akwenzi mqondo, ngoba impendulo kuyoba. Icala izikhalazo mayelana nezinqumo zokwahlulela noma izikhalazo okuphindaphindiwe impendulo yanikelwa ngenxa okuyinto ngaphambili. Uma impendulo lomshushisi akazange ukwanelisa umfakisicelo, angawubhala egunyeni eliphakeme. Uma sicabanga ukwelashwa, umshushisi kungenzeka ukukhulula abantu ebambekile ngokungemthetho lokubhikisha ngezenzo ezingqubuzana nomthetho, afake isicelo enkantolo ukuze ehoxile, ukwenza Ukuze kuqedwe ukwephula umthetho, ukuthatha izinyathelo ukuze abenzi bokubi ukwephulwa ebulungisweni.
Uchungechunge oluthi "Konke kwaqala e Harbin": nabalingisi wanika angabhekani nosizi lokukhulelwa Eminyakeni yamuva